Gịnị bụ mmekọrịta dị n'etiti ihe oriri na ihe ndị mara mma ? ~ Jasa Buat Web MLM Desain
Gịnị bụ mmekọrịta dị n'etiti ihe oriri na ihe ndị mara mma ?
15.57 Juragan Channel No comments
Gịnị bụ mmekọrịta dị n'etiti ihe oriri na ihe ndị mara mma ? Ma synergize kacha mma abamuru gị idem. Ma, ọnọdụ , ihe niile ọ chọrọ ka http://www.layananseomurah.com/2014/01/ligataruhan-agen-bola-agen-sbobet-agen.htmlM'we ke -aga n'ihu ihe ndabere ya ka mma na aka iso .
Mgbe lekwasịrị anya ukw
uu too gị mara mma ọdịdị ntutu gị na anụ ahụ, nke kachasị elu na nganga kere eke. Akan oro, mma mma bụ nweta dị ka usoro ịgwọ ọrịa ị na-eme mgbe nile.
Ọ bụrụ na ọ dị naanị conditioner na mineral na -arụ ọrụ ebube na ịma mma nke ntutu gị , ugbu a, na ọ dị oge nye ndị ọzọ anya ka anụ na- edozi oriri . Gịnị ka a ga- atụle . Lee ya, o dere, sị ya nyochaa ka Idiva .
N'ihi na ndị mara mma na ntutu
Iji mara mma ntutu isi, ị chọrọ protein na ígwè . " Hair oyomde protein ka inyere ibu ," na-edozi ẹdude ke agwa na ọkụkọ . Achọrọ ntutu isi nke onwunwu ?
" Jupụta mgwa ihe si na ọtụtụ ndị isi mmalite nke beta carotene ke pumpkins , carrots na akwụkwọ nri ,"
N'ihi na mekwara ka Adam rie anụ
Vitamin C dị oké mkpa n'ihi na mmepụta nke collagen , a akụrụngwa nwere ike ịnọgide na-enwe na elasticity gị akpụkpọ . " Isi mmalite nke vitamin C bụ mkpụrụ osisi ndị dị ka oranges , lemons , na limes ," .
N'ihi na mma mbọ
Ị na ugboro ugboro agba gị mbọ anya ihe ndị mara mma ? Ọ bụrụ na ee, ị kwesịrị ị na -edebe gị mbọ ike. Ike mbọ ga-eme ka gị na mbọ anya ọzọ mara mma inye anya .
" Ka gị mbọ ike mgbe achọrọ oriri nke calcium na-akwado ike ,"
Isi mmalite nke calcium ike nke enwetara site na sesame osisi na akwụkwọ nri . Mineral dị ezigbo mkpa iji gbochie gị mbọ si fragility . Ị nwere ike pụọ sịlịkọn .
" Apụl , almọnd na obere ego bụ ihe kasị mma isi iyi nke sịlịkọn ,"
N'ihi na dị sachaa anya
Kacha mma isi iyi nke mara mma Joko warino Blog n'anya na- imezu ihe ot nke beta carotene . Dị ka akụkụ nke vitamin B mgbagwoju , beta- carotene dị ezigbo mkpa na- retina nke anya idebe ya mma.
" Carrots , ọbara ọbara na-ede ede ma na -acha ọla edo na-ede ede bụkwa ndị kasị mma isi iyi nke vitamin ,"
N'ihi na ike ezé
Brushing gị ezé ugboro abụọ na ụbọchị dị nnọọ mma iji na-enwe na-acha ọcha ezé . Ma, iji mee ka ọ kwụsie ike , ị chọrọ iri ihe oriri nkwado dị otú ahụ dị ka mmiri ara ehi, cheese, na ụfọdụ ndị ọzọ Mmiri ara ehi na ngwaahịa .
" Calcium dị oké mkpa iji nọgide na gị ezé ike ma gbochie ya ire ere ,"
Echefukwala na-agụnye ike abụba ke iyak mmanụ , dabere meats , akụ , bọta, na mmiri dị ka ezi ndụ nri .